Condenser evaporative, Tower mangatsiaka, fitsaboana rano - Yubing
Ny cooler anay dia nampiharina betsaka tamin'ny sehatr'asa samihafa mba hifandraisany amin'ny fitaovana efa nihena.
Ny vidin'ny fikolokoloana sy angovo ambany dia vokatry ny famolavolana rafitra tsy misy olana.
Raiso foana ny fahombiazan'ny vidiny indrindra mandritra ny tsingerin'ny fiainana manontolo.
Araho ny fitantanana tetikasa azo itokisana ary valio haingana ny serivisy aorian'ny varotra.
Mpanamboatra matihanina ny rafitra Tower Cooling
Condenser evaporative mahomby amin'ny indus ...
ICE Industrial Reverse Osmosis System ho an'ny Cooli ...
ICE Rafitra fanamafisana fasika avo lenta ho an'ny ...
Fahombiazana sy fitsitsiana angovo
Ahenao kely ny angovo sy ny rafitra, ny fanjifana rano, ny fikojakojana ary ny fametrahana azy amin'ny alàlan'ny fampangatsiahana avo.
Ampitomboy ny fahombiazan'ny vidiny mandritra ny tsingerin'ny fiainana manontolo.
Ny famolavolana plug and play dia miteraka fametrahana tsotra sy ara-toekarena.
Maharitra sy azo ianteherana
Tsy manimba, lava fiainana ary lanja maivana.
Ireo tilikambo mangatsiaka dia apetraka ao anatin'ny indostria ho toy ny singa manan-danja miaraka amin'ny masinera mavesatra maro hafa ao amin'ny sehatry ny indostria izay nandray anjara tamin'ny famokarana, fanodinana na fanangonana vokatra. Ny fizotran'ny indostrialy isan-karazany dia mahatonga ny rano ho mafana izay arotsaka ao anaty tilikambo mangatsiaka. Ny fantsakan'ny tilikambo fihenan-tsakafo dia manaparitaka ny rano mafana ao amin'ny "fenom-baovao" izay misy velarana ambony indrindra ary izany dia mitarika amin'ny fifandraisan'ny rivotra amin'ny rano mba hampangatsiaka ny rano. Ny tilikambo fihenan-tsasatra dia be mpampiasa amin'ny fanadiovana solika, zavamaniry petrochemical, zavamaniry hafanana, zavamaniry nokleary, zavamaniry fanodinana sakafo, zavamaniry entona voajanahary sns.
Faly izahay mandray ny fanontanianao ary manome fanampiana avy hatrany.
Ny tilikambo fihenan-tsakafo dia ampiasaina indrindra amin'ny fanamafisana, ny rivotra, ary ny rivotra (HVAC) ary ny tanjon'ny indostria. Izy io dia manome fiasa miasa amin'ny fomba mahomby sy mahomby amin'ny angovo. Maherin'ny 1500 ny fotodrafitrasa indostrialy mampiasa rano be dia be mba hampangatsiaka ny zavamaniry. HVAC ...
Rafitra fanasitranana rano ho an'ny Tower Cooling
Ho an'ireo orinasa indostrialy mampiasa tilikambo fihenan-tsasatra ho an'ny toeram-ponenany, karazana rafi-pitsaboana rano fanamafisam-peo matetika no ilaina mba hahazoana antoka fa misy dingana mahomby sy fiainana serivisy maharitra. Raha avela tsy voatsabo ny rano tilikambo mangatsiaka, dia mety ...
Ny tilikambo fihenam-bidy dia mpamadika hafanana, ao anatiny ny hafanana dia esorina amin'ny rano amin'ny alàlan'ny fifandraisana eo anelanelan'ny rano sy ny rivotra. Ny tilikambo fihenan-tsasatra dia mampiasa ny fitrandrahana rano mba handavana ny hafanana amin'ny fizotrany toy ny fampangatsiahana ny rano mikoriana ampiasaina amin'ny fanadiovan-tsolika, zavamaniry simika, zavamaniry herinaratra, vy mil ...